तालिबान: नेता को ? हिबातुल्लाह अखुन्दजादा र मुल्लाह गनी बरादरमध्ये कसले सम्हाल्लान् अब अफगान सरकार ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
तालिबान: नेता को ? हिबातुल्लाह अखुन्दजादा र मुल्लाह गनी बरादरमध्ये कसले सम्हाल्लान् अब अफगान सरकार ?
काठमाडौं, ३२ साउन । अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिवानले देशका सबै प्रमुख शहरहरु र राजधानी काबुलसमेत कब्जामा लिएको छ । राष्ट्रपति अशरफ घानी र उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेहले देश छाडिसकेका छन् । पुरानो सत्ता ढलेसँगै अब अफगानिस्तानको सत्ता कुन तालिवानी नेताले सम्हाल्लान् त ?
उनले आफ्नो जमिनमा दुश्मनको अन्त्य नभएसम्म जिहाद ९मुश्लिम धर्मअनुसार दुष्टहरुको विनाशका लागि धार्मिक युद्ध० चलिरहने बताएका थिए ।
हिब्तुल्लाह अखुदजादा अफगानिस्तानको तालिवानका नेता हुन् । इस्लाम धर्मका विद्वान उनी कन्दाहारसँग सम्बन्ध राख्छन् । उनले तालिवानलाई दिशानिर्देश गरेको र वर्तमान अवस्थासम्म ल्याएको विश्वास गरिन्छ । काबुलपछिको सबैभन्दा ठूलो शहर कन्दाहारमा तालिवान समूहको पकड बनाउन उनको ठूलो हात छ ।